Lasa Aloha Loatra i Mama Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2014 22:00 GMT
Tandahatra miaramila Okrainiana tsy milanja fiadiana miatrika toerana iray fanaraha-mason'ireo milisy ao Crimée.
Tamin'ireo adiny rehetra taty aorian'ny faharavàn'i Sovietika, mbola mitoetra hatrany ho ny iray amin'ireo tafika matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao ny milina ara-tafika Rosiana. Amin'ny fahalàlana izany, alaivo sary ao an-tsaina ny tsy fisan'ny fanantenana ho an'ireo miaramila Okrainiana tsy ampy fiadiana mitoby ao Crimée amin'izao fotoana izao, toerana izay misy milisy manakan-dàlana sy manakenda ny seranam-piaramanidina amin'ny fametrahana toerana fanaraha-maso. Heverina mialoha fa voatohana tsara ara-pitaovana (ary matetika tohanan) ny tafika Rosiana, nataon'ny milisy ao Crimée tapi-dalan-kaleha ary nosakanany ireo miaramila Okrainiana tao amin'ny toby, hatrany amin'ny seranam-piaramanidina, ary any rehetra tany.
Ny 4 Martsa 2014, nanao filatroana tao amin'ny Seranam-piaramanidin'i Sevastopol ny miaramila Okrainiana eo amin'ny 50 eo ho eo tsy milanja fiadiana, nanandrana naka ny tobin-dry zareo indray. Teny an-dalàna, nifanehatra tamin'ireo andianà milisy ry zareo miaramila, milisy izay nanao tifi-danitra ho fampitandremana, nanaome baiko an'ireto andia-miaramila ireto hiato. Taorian'ny fifampiraharahana henjana, nanome alàlana ny folo tamin'izy ireo handingana ny faritra fanaraha-maso ireo milisy, hiditra tao amin'ny seranam-piaramanidina.
Mazava ho azy fa nahasarika ny sain'ireo mpampiasa aterineto ilay filatroana miaramila tsy nilanja fiadiana, izay nidera ny fanehoam-pahasahiana sy ny tsy nisian'ny herisetra. Eny tokoa, na dia ny 1/5 amin'ny andiany monja aza no zakany teny an-dàlana, nanaovan'ireo tranonkalam-baovao Okrainiana lohateny vaventy hoe “Diabe iray Teo Ambany Bala: Vitan'ireo Miaramila Okraniana Tsy Nilanja Fiadiana Ny Namerina Ny Filaminana Tao An-tseranam-piaramanidin'i Berberk.”
Tandahatra miaramila Okrainiana tsy milanja fiadiana nijaridina raha mbola eo ampijerena ny findainy ny mpibaiko an-dry zareo.
Vakian'ireo Rosiana mpampiasa Facebook ho fandisoana ilay filazana fitsoahana an-daharana faobe namely ny tafika Okraininana ny zavatra mitranga (izay nezahan'ireo manampahefana ao Crimée natavezina tamin'ny herinandro lasa). I Barabanov, mpanao gazety manoratra ho an'ny Sevastopol, dia nandefa [ru] tao amin'ny Facebook fa efa nitranga nanerana an'i Crimée ny fifanandrinana toy izao teo amin'ny tafika Okrainiana sy ireo milisy mitam-piadiana. “Olona tsy misy fotony,” hoy ny fanontanian'i Barabanov tsy resy lahatra, “nitaza tamin'i Vladimir Vladimirovich [Putin] fa tafika 22.000 nambara fa nitsoaka an-daharana no mijoro manohana ny governemanta Okrainiana?”
Ao anaty lahatsary iray ao amin'ny YouTube (jereo eto ambany) avy amin'i Andrei Borisenko (namerina namoaka ny tao amin'ny fahitalavitra Okrainiana), azo atao tsara ny manao fiatoana kely mandritry ny teo minitra sy fifampiraharahana ao Sevastopol androany. Raha nitranga tokoa araka izay nitateran'ireo mpanao gazety azy ny fifanatrehana, ilay lahatsary Youtube (manodidina ny 2:18 eo) dia miaty fanehoankevitra avy amin'ny iray amin'ireo milisy (ny rantsana mahery fihetsika indrindra) izay mikaika amin'ireo miaramila Okrainiana hoe “Avy eto koa aho”, manazava ny fihetsiny ho toy ny valin-kafatra amin'ireo “fihantsiana”. Tohizany amin'ny hoe , “roa herinandro lasa izao, nijoro niaraka tamin'ny kibay fotsiny aho (hanohitra ireo fihantsiana) ” izay midika fa Berkut izy tany aloha.
Lojika be ny fisian'ìreo manampahefana fahiny tao amin'ny Berkut ao anatin'ny tafi-piarovana ao Crimée. Manodidina ny herinandro teo angamba, noravàn'ny [ru] governemanta vaovaon'i Okraina ao Kiev ny Berkut—hery manokana izay niady tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana tao an-drenivohitr'i Okraina nandritry ny volana maro nanaovana fitakiana teo aloha teo. Marobe ireo manampahefana Berkut niverina (nandositra) nankany atsinanan'i Okraina, kanefa, noraisina toy ny mahery ro. Ankoatra izay, tsy ela akory taorian'ny nandravàna an-dry zareo dia manomboka miladilady maka ny fon'ireo [ru] Berkut fahiny ny manampahefana Rosiana sy Krimeana.
Raha fambara zavatra ilay lahatsary Youtube avy ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Berbek androany, ireo bekotro maroholatry ny Berkut avy ao Maidan kosa maniry fatratra ny haneho izay azon'izy ireo atao miaraka amin'ireo fitaovam-piadiany “armes automatiques” miaraka amin'ny Rosiana eo anilan-dry zareo.